के तपाईलाई अनिद्राको समस्या छ ? यस्ता छन् छुटकारा पाउने विधि « Sansar News
के तपाईलाई अनिद्राको समस्या छ ? यस्ता छन् छुटकारा पाउने विधि
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १४:५६
२२, फागुन, काठमाडौं । अनिद्रा सुत्न नसक्नु वा नसुत्ने बानी हो । यदि एक महीनासम्म प्रति हप्ता तीन रात सहज रूपमा निद्रा लागेन वा निदाउन सकिएन भने त्यसलाई चिकित्सकीय भाषामा अनिद्रा भनिन्छ । अनिद्राको कुनै निश्चित एउटै कारण हुँदैन । शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, आर्थिक आदि धेरै कारणले अनिद्राको समस्या देखिन सक्छ।
सन्तुलित खाना, स्वच्छ पानी, शुद्ध वायु जस्तै अपरिहार्य छ, गहिरो निद्रा पनि । चिकित्सकहरुले यसलाई औषधि समान भनेका छन् । अर्थात गहिरो निद्रा लिनु भनेको स्वास्थ्य शरीरको सूचक पनि हो । जब निद्रा विथोलिन्छ, स्वास्थ्यमा गडबड सुरु हुन्छ । अनिद्रा आफैमा एक यस्तो समस्या हो, जसले अरु समस्या पैदा गर्छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, तनाव, छटपटीसँगै अरु रोगहरु यसले निम्त्याउँछ ।
१०.नियमित योग, व्यायामको कमी।
अनिद्राबाट कसरी छुटकारा पाउने त ? यस्ता छन् केही सरल उपायहरु ।
असजिलो ओछ्यान हुदा डसना वा म्याट्रेसले पनि तपाईंको निन्द्रा खराब गर्न सक्छ । तपाईंलाई रातभर उठ्न र यताउता फर्कन बाध्य बनाउन सक्छ । यसले मांसपेसीहरुमा तनाव, नशा च्यापिने, शरीर दुख्ने र शारीरिक बनावटमा दिर्घकालिन क्षति पुर्याउन सक्छ । ओछ्यान सजिलो भएमा मात्रै तपाई आनन्दले निदाउन सक्नुहुन्छ ।
तपाईले आफू सुत्ने स्थानमा कामसँग जोडिएका वस्तुहरु, मोबाईल वा अन्य मनोरञ्जनका साधनहरु नराख्नुहोस । कुने विशेष स्थानलाई ‘आरामक्षेत्र’ घोषणा गरेर त्यहाँ आरामदायक निन्द्राको लागि सहायक हुने वस्तुहरु जस्तै बास्नादार मैनबत्तिहरु, ध्यान एकाग्र गर्ने संगीत जस्तै पानी परिरहेको जस्तो निरन्तर आउने आवाज आउने व्यवस्था गर्नुहोस । यस्तो गरेमा तपाई दिमागलाई आवश्यक शान्ती प्राप्त हुन्छ र तपाई आरामले निदाउन सक्नुहुन्छ ।
लामो समयसम्म निद्राको समस्या रहिरहेमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुको रोग, डिप्रेसनलगायत दीर्घकालीन रोगहरुले आक्रमण गर्छन्। तसर्थ समयमा नै सचेत भई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु बुद्घिमानी हुन्छ।